inotangwa : 1998
Musakanganwa kuti discuss Zayed University
Zayed University ndiyo nyika uye remunharaunda mutungamiri utsanzi redzidzo. rakavakwa 1998 uye muchizvikudza vaitakura zita Akatanga Kworudzi - mukupera Sheikh Zayed remarara Sultan Al Nahyan, ichi flagship inisitichusheni akasangana netarisiro President dzakakwirira. nhasi, Zayed University ane pazvikoro ano mbiri Dubai uye Abu Dhabi kuti kugamuchira dzakawanda vadzidzi vose.
Zayed University achava aitungamirira yunivhesiti iri United Arab Emirates uye kuzivikanwa munyika yose nokuda kwayo kubatanidzwa kubudirira dzidzo uye zvetsika uye vapfume youpfumi uye yenzanga kukura.
Zayed University zvichavagadzirira dzinokwanisa kudzidza vari kubatsira kuvaka rudzi kuburikidza nechipiriso specializations uye zvirongwa dzokudzidza izvo zvienderane nezvinodiwa dzakawanda uye nokupa chakanakisisa ekudzidza kusimbisa basa yunivhesiti somutungamiriri kufambira mberi kwesainzi uye munharaunda basa.
A pakubatsirana Educational nharaunda umo vadzidzi, faculty and staff work together in pursuit of research and knowledge.
Nezvemabasa hwetsika rwenyanzvi nokuomerera soro mitemo pachedu mufambiro, hwakavakirwa pakuremekedza, kuvimbika, zvinhu sezvazviri, kuzvidavirira uye pachena mune tsika uye kurangwa.
Innovation kuburikidza kuitwa uye kwemashoko chemhando yose tsika mukudzidzisa, kudzidza uye tsvakurudzo.
Kushandirapamwe uye pamwe chete nechokwadi kubudirira kwakaita Zayed yeYunivhesiti basa uye inokosha zvinangwa vane kunonyanyisa kunyatsoshanda uye kubudirira.
Leadership yakavakirwa administrative zvakaisvonaka uye chinopfuurira kutaurirana pakati zvose University vane chekuita uye kubudirana pachena kune dzimwe tsika, pakubata nokungwaririra uye chokwadi navo, zvose mukati nokunze kuyunivhesiti vemunharaunda
Simbisai munhu vakaveza-kumucheto kwenharaunda zvedzidzo inosimudzira okugadzira zvinhu uye utsanzi.
Gadzirira dzinokwanisa kudzidza vari kubatsira kukura muitiro, uye vari kubudirira rudzi rwavo, simba anonetsa mafungiro unyanzvi, uye pachena kuti nyika yakavapoteredza.
Rwirai yepamusoro dzidzo kuti dzinosimudzira tichipfumisa vadzidzi’ ruzivo uye unyanzvi.
Ndiwedzere yeYunivhesiti tsvakurudzo pamwero.
Nechokwadi nourongwa vose administrative mabasa uchiwirirana tiine unhu, Kushanda uye pachena mitemo.
Kuparadzira tsika utsanzi mukati sangano
Technology & dzidzo
masvomhu & Statistics
Unoda discuss Zayed University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo